Inona no hatao amin'ny ririnina any Frantsa | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Fialantsasatra any Eropa, Frantsa
Angamba ianao efa mikasa ny fialan-tsasatry ny ririninao ary mikasa ny handeha amin'ny toerana hafa ianao na dia mangatsiaka aza satria fantatrao fa mora kokoa ny vidiny ary satria tsy dia be olona. France no tiako holazaina. Frantsa dia firenena tsara tarehy tsy manam-paharoa feno majika amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona, Fa amin'ny ririnina dia afaka mahita fijanonana mora vidy ianao ary na dia mangatsiaka aza, miaraka amina hafanana roa dia azonao atao ny mankafy ny zavatra rehetra atolotry ny firenena amin'ity vanim-potoana majika ity satria ririnina.
Inona no mety ho tantaram-pitiavana kokoa noho ny mandeha mitsangatsangana any Frantsa ho mpivady sy mankafy ny lanezy? Fa na irery, mpivady, miaraka amin'ny namanao na miaraka amin'ny fianakavianao ... tsy misy isalasalana, ny fandehanana any Frantsa dia fotoana mety hankafizana fitsangatsanganana mahatalanjona feno majika. Saingy, raha iray amin'ireo olona mieritreritra ianao fa amin'ny ririnina dia tsara kokoa ny tsy mandeha satria tsy afaka mankafy azy amin'ny fomba mitovy… aza hadino ny zavatra rehetra azonao atao amin'ny ririnina any Frantsa.
1 Mandehana any amin'ny tsena Krismasy
2 Ankafizo ny gastronomy
3 fanatanjahan-tena amin'ny ririnina
4 Mandehana any amin'ny Fetin'ny Jiro any Lyon
5 Mandehana any Paris
Mandehana any amin'ny tsena Krismasy
Raha mikasa hankany Frantsa amin'ny Noely ny fikasana dia tokony ho fantatrao fa amin'ny volana desambra dia avo dia avo ny vidiny nefa mendrika ny fampiasam-bola satria fotoana tena miavaka. Amin'ireny daty ireny dia afaka mandeha any amin'ny tsena krismasy ianao ary hijery ny fomba famirapiratan'ny jiro sy ny rivotra dia feno loko marevaka.
Feno feo sy sary Noely ny arabe ary afaka mahita fanomezana tsara ho an'ny olon-tianao ianao na aiza na aiza no tadiavinao. Eny an-tsena dia azonao atao ihany koa ny mahita carousels sy fialamboly ho an'ny ankizy. Ireo tsena dia hita manerana ny firenena, fa ny malaza indrindra dia ireo any an-tanàn-dehibe toa an'i Lille na Strasbourg. Na dia any amin'ny tanàna kely toa an'i Tarn Castres aza dia manana tsena tsara tarehy koa izy ireo. Ny ankamaroan'ny tsena krismasy dia misokatra amin'ny faran'ny volana novambra na ny voalohan'ny volana desambra. Ny sasany mihidy amin'ny Alin'ny Krismasy na mitohy hatramin'ny faran'ny volana Desambra.
Ankafizo ny gastronomy
Malaza noho ny kalitaony ny gastronomy frantsay ary misy zavatra raha mandeha ianao dia tsy maintsy manandrana: ny truffle mainty. Raha tsy iray amin'ireo olona tia manangona truffle anao manokana ianao dia tokony ho fantatrao fa azonao atao ny mividy azy ireo manomboka amin'ny tapaky ny volana novambra ka hatramin'ny fiandohan'ny volana martsa.
Amin'ny ririnina dia azonao atao koa ny mankafy ny sakafo fety toy ny foie gras, salmon mifoka na ny sôkôla masina mahafinaritra. Raha mankany Frantsa ianao dia tsy mila mitady trano fisakafoanana na fivarotana sakafo tsara izay akaiky ny toerana ipetrahanao mba hankafizanao ny gastronomie régional. Tsy hanenina ianao ary ho tianao ny manandrana sakafo vaovao.
fanatanjahan-tena amin'ny ririnina
Manana ny faritra ski lehibe indrindra eto an-tany i Frantsa toa an'i Les Trois Vallées, Paradiski Espace Killy sy maro hafa. Manolotra fanamby lehibe ho an'ny mpanao ski sy ny tehezan-tendrombohitra mety ho an'ny vao manomboka koa izy io. Misy ihany koa ireo complexe izay miompana amin'ny fizahan-tany ao amin'ny fianakaviana amin'ny vaovao as Flaine akaikin `ny Mont Blanc.
Ny fifandraisan'ny fitaterana dia tena tsara toa ny seranam-piaramanidina frantsay any Chambery, Grenoble, Lyon Bron ary Lyon Saint Exupéry izay mifanakaiky akaiky sy ireo faritra ski manodidina azy, ka ho mora ny mankany amin'ny toerana alehanao. Raha avy any UK ianao, dia misy sidina mora vidy amin'ny kaompaniam-piaramanidina lafo vidy.
Ny gara rehetra izay mandeha any amin'ny resort ski dia manana mpampianatra miteny anglisy ka raha mahay teny anglisy sy frantsay ianao dia tsy hanana olana amin'ny fifandraisana amin'ny olona manodidina anao.. Amin'ny toeram-pialan-tsasatra dia matetika izy ireo dia manana toeram-pialan-tsasatra izay anaovany fety mandritra ny ririnina, fifaninanana sary sokitra amin'ny lanezy ary na ny kaonseritra mozika kilasika sy jazz… azo antoka ny fialamboly.
Ankoatry ny fanaovana ski frantsay dia azonao atao koa ny mankafy fampirantiana sy fanaovana skide, tobegasy ary skating. Ny ski an-tanety dia malaza ihany koa na fanatanjahantena tafahoatra izay mahazo laza bebe kokoa toy ny filentika anaty rano.
Mandehana any amin'ny Fetin'ny Jiro any Lyon
Nandritra ny efatra andro nanomboka ny 8 desambra lasa teo, dia mirehitra tsara ny tanàna faharoa any Frantsa, Lyon. Ny tranom-panjakana dia nohazavaina amina endrika kanto amin'ny loko isan-karazany avy amin'ireo mpanakanto fanta-daza sy mpanao mari-trano. Feno jiro harona taratasy ny tranon'olona sy ny arabe… niova ho fahitana an-tanàn-dehibe manazava ny tanàna. Nahasarika mpizahatany efatra tapitrisa tao an-tanàna ny festival. Raha mandeha ianao dia mety ho vavolombelona amin'ireo fametrahana jiro mahavariana. Toy ny hoe tsy ampy izany, misy ihany koa hetsika isan-karazany ho fanomezam-boninahitra ny Fetin'ny Jiro natokana ho an'ny mponina sy ho an'ireo mpizahatany rehetra maniry hankafy ireo festival tsara tarehy ireo.
Mandehana any Paris
Toa tanàna hafa i Paris rehefa tonga ny ririnina. Tsy misy zavatra mahagaga kokoa noho ny mandeha amin'ny ririnina eo amoron'ny renirano Seine mijery ireo tranobe goavambe amin'ny rivotra mangatsiaka madio. Rehefa nandao ny tanàna nahaterahany ireo mpizaha tany fahavaratra dia mahatsapa fa anao ny tanàna. Afaka mankafy ny Galeries Lafayette ianao mahita ny hazo krismasy miaraka amin'ny haingon-trano volamena mahafinaritra. Azonao atao koa ny mankafy ireo jiro krisimasy izay mitsivalana amin'i Champs Elysees… manaporofo fa izy ireo no jiro tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Disneyland Paris, mazava ho azy, manome anao seho mahafinaritra ary misy rinks mihosin-dranomandry be dia be hahafatesan'ireny kaloria fialantsasatra fanampiny ireny ... hahafahanao mividy fonosan-trondro voatsatsika na mipetrapetraka eo amin'ny terrasao mba hisotroana kafe matsiro. na ny sôkôla mafana mafana tsara azonao andramana.
Mazava ho azy, tsy ho adinonao ny mankeny amin'ireo fety manerana ny firenena, mankanesa any amin'ireo spaoro mahatalanjona mba hizarana ny hatsiaka amin'ny fomba mety indrindra na handeha hiantsena amin'izay toerana fialamboly izay ahitanao ny rehetra manerana ny firenena. Efa fantatrao ve izay tianao hatao rehefa mandeha amin'ny ririnina any Frantsa ianao amin'ny fialantsasatrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Frantsa » Inona no hatao amin'ny ririnina any Frantsa
Valan-javaboary maritime-terrestrial nasionaly amin'ireo nosy Atlantika any Galicia